I-bungalow ethandekayo enhliziyweni yeCarraroe - I-Airbnb
I-bungalow ethandekayo enhliziyweni yeCarraroe
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Charbobben Properties
U-Charbobben Properties Ungumbungazi ovelele
I-bungalow enamakamelo amathathu edolobhaneni laseCarrroe enhliziyweni yentshonalanga ye-Ireland. Imizuzu emi-2 ukuya kuzo zonke izinsiza zedolobhana futhi ushayela ngaphansi kwemizuzu emi-5 ukuya emabhishi amathathu amahle (okubandakanya i-coral strand). Yindawo efanelekile yokuhamba ngezinyawo, ukudoba ogwini, ukubhukuda, i-scuba diving, ukuhamba ngebhayisikili eduze kwamabhoreen angapheli noma isisekelo sokuhlola indlela yasendle yase-Atlantic. Izivakashi zisebenzisa ngokugcwele ingadi yendlu nesango elizimele elinevulandi elivaliwe elenza ilungele izingane ezincane.
Amakamelo okulala amabili anemibhede elingana nenkosi enethezekile kanti igumbi elilodwa yi-ensuite encane ephindwe kabili. Kunegumbi leshawa elilodwa elinebhavu, indlu yangasese eyodwa ene-en-suite eneshawa kanye nendlu yangasese eyengeziwe.
ICarraroe (An Cheathrú Rua) itholakala enhlonhlweni engamakhilomitha angama-50 entshonalanga yedolobha laseGalway emgwaqeni osogwini ( R336). I-Carraroe ise-Connemara Gaeltacht futhi isi-Irish (Gaelic) siwulimi lokuqala. Kumakhilomitha angu-8 ukusuka eRossaveal (Ros a Mhíl) isikhumulo semikhumbi sase-Aran Islands ngakho-ke kuyindawo ekahle yokuvakashela iziqhingi noma ukuvakasha e-Connemara. Kunamabhishi amaningana amancane aphephile endaweni, okuthakazelisa kakhulu i-Coral beach (Trá an Dóilín) elakhiwe ngamagatsha njengezingcezu ze-lithothamnium nolunye ukhula lwasolwandle oluqinile. Futhi iyindawo edume kakhulu yokutshuza. Ziningi izinkambo ezithokozisayo ongazithatha endaweni futhi njengoba iCarraroe iyinhlonhlo kungenzeka ukuthi uthathe izihibe eziningi uzungeze inhlonhlo. Ulwandle luphinde lube nefulegi eliluhlaza okwesibhakabhaka elivela e-E.U.. Izikebhe zakwaseyili zendabuko - i-Hooker, i-Gleoiteog ne-Pucan zisazobonakala zihamba ethekwini futhi kukhona ama-regatta amaningana abanjwa ehlobo. Omunye wemikhosi emikhulukazi - i-Féile an Dóilín ibanjelwa e-Carraroe ngempelasonto yokuqala ka-Agasti. Ezikhathini zakudala izikebhe ezinkudlwana zazisetshenziselwa ukuthutha i-turf ukusuka e-peat bogs yase-Connemara kuya e-Aran Islands nase-Co. Clare. Njengoba isi-Irish siwulimi oluyinhloko endaweni kunezifundo eziningana ezibanjwa ehlobo zabafundi bezinga lesibili emakolishi ama-2 ase-Ireland. Abafundi bahlala nemindeni ekhuluma isi-Irish ngesikhathi sokuhlala kwabo kwamasonto ama-3 ezifundweni. I-tAcadamh - iyingxenye yoMnyango wase-Ireland weNational University of Ireland Galway. Izifundo zibanjelwa lapho abantu abadala, abafundi bezinga lesithathu kanye nabangaphandle.
Ibungazwe ngu-Charbobben Properties
Ku-imeyili nefoni. Ukuzihlola wena
UCharbobben Properties Ungumbungazi ovelele